लाहुरे राहुलकी श्रीमती स्मिताले फेरि के गरिन् यस्तो राहुल दाइले पोखे पि’डाहरु, (भिडियो सहित) - Nawalpur Dainik
लाहुरे राहुलकी श्रीमती स्मिताले फेरि के गरिन् यस्तो राहुल दाइले पोखे पि’डाहरु, (भिडियो सहित)
फेरि लाहुरे राहुलकी श्रीमती स्मिताले के गरिन् यस्तो राहुल दाइले पोखे पिडाहरु, भिडियो सहित, केही समय अघी एकदमै भा ईरल भएको घ ट्ना हो । अहिले उनिहरु एक अर्का सँग मिलेर बसेका छन् । जस्तो जे भएनी आफ्नो छोरी को भ’बिश्य को लागि उनिहरु सँगै बसेका हुन् ।
अहिले का च’र्चित अबम कु’सल प’त्रकार सन्तोष देउजाले उनिहरु को मिलन गराइदेका हुन् साथै भिडियो यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ साथै यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्नको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला, फेरि लाहुरे राहुलकी श्रीमती स्मिताले के गरिन् यस्तो! राहुल दाइले पिडा भुल्न यस्तो, यो तलको भिडियोलाई skip नगरि पुरा हेर्नुहोला साथै सम्पूर्ण नेपाली माझ पुर्याउन लाइकको साथमा एक शेयर अवश्य गर्नुहोला, यदि च्यानललाई अहिले सम्म Subscribe गर्नु भएको छैन भने channelलाई Subscribe गरि नजिकै रहेको bell icon दबाई हामी सँगै जोडिनुहोला,
आउनुहोश हेरै यो भिडियो जुन भर्खरै सर्बजनिक भएको छ: भिडियो हेर्न यहाँ
अर्को समाचार पनि पढ्नुहोस, आमाको काख स्वर्ग सामान हुन्छ। धेरै दम्पत्ती सन्तान भने पछी हुरुक हुने गर्दछन। कुनै आमा होला र आफ्नो सन्तान लाई हेला र माया नगर्ने । आमा भन्ने शब्द नै प्रिय लाग्ने गर्दछ । प्रेम, माया , सद्भाव र कारुणाको खानी हुन आमा। आफ्नो ९ महीना सम्म कोखमा राखेर जन्मा दिएकाे सन्तान लाई माया नहोला र?
तर काअस्कीमा भने १ भयंकर, अचम्म र कहा,लीलाग्दो घ,टना घटन पूगेको छ । सुन्दा पनि आचम्म लाग्ने। आफ्नो अामाले ४२ दिनकाे शि’शुलाई घाँटी थिचेर ह त्या गरेको छिन । पोखरामा १ दम्पती बस्ने र जसबाट मात्र १ सन्तान , जो ४२ दिन मात्र भएको थियाे। श्रीमान ज्याला मजदुर गरेर गुजारा गर्ने गर्दथे तर ति श्रीमान लाई नै नसोचेको घ ट ना अाई लागेको छ । जब म बिहानको खाना खाएर, काममा जाने बेला सम्मा सबै ठिक र राम्रो थियाे तर म गए पछी भने सबै घ ट ना भएछ।
उक्त दिन भने श्रीमानके आफ्नो श्रीमती लाई बच्चा सानो छ आफ्नो र रुम पनि सफा गर्नु नत्र कोरोना के के रोगहरु लाग्ने मात्र भनेको उनके बताए । अरु धेरै हामी बीच कुनै कुरा भएन । तर के कारणले आफ्नो सन्तानअको लागि आफ्नो आमा नै शै;तान बनेर अाईन, सम्झदा पनि म न दु ख्ने गर्दछ । यस्तो आमा हुनु बुन्दा त ठु हुराे हुनु धेरै जाती उनले थपे। आफ्नो विवाह यति सुन्दर कहिल्यै भएको थिएन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। स्वास्थ्य अरूसित आनन्द बाँडेर फुल्छ।
संयुक्त उद्यम र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरुमा लगानी नगर्नुहोस्। घरमा केही परिवर्तनले तपाईंलाई अत्यधिक भावुक बनाउनेछ – तर तपाईं प्रभावकारी ढंगले तपाईंको कुरा बुझ्ने मानिसहरूलाई आफ्नो भावना प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। रोमान्सको लागि धेरै राम्रो दिन होइन किनकि तपाईंले साँचो प्रेम पाउन सक्नु हुनेछैन साथै यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्नको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला,
Prevचैत ३१ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
Nextतपाईंको हातमा कहिल्यै पैसा टिक्दैन ? भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ४ कुराहरू !